နန်းသီရိလွင်| January 19, 2013 | Hits:4,078
မျိုးချစ် January 19, 2013 - 5:30 pm တိုက်လေယဉ်မသုံးရင်လုံဝမနိုင်ပါဘူး။မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့သတ္တိဆိုတာတိုက်လေယာဥအားကိုးနဲ့ပြောတာလားမသိဘူး။
Reply Mr Kian January 19, 2013 - 7:02 pm yes, thats right…
Reply john sanlin January 20, 2013 - 7:32 am please Correct the date 19January 2013 . 06:00AM
Reply Myo Nyunt January 20, 2013 - 1:01 pm ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်တွေ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား
Reply မောင်လဆိုင်း January 20, 2013 - 10:36 pm ဗန်းမော်-လွယ်ဂျယ်လမ်းမှာ ကေအိုင်အေက 19-01-2013 ရက်နေ့က အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ ဗင်ကား ( ၂ )နှစ်စီး နှင့် ဟိုင်းလတ်ကား ( ၁ )စီးကို မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာ ပြည်သူလူထုတွေ ဒဏ်ရာရသွားတယ် အများကြီးပဲ အနည်းဆုံး ( ၁၉ ) ယောက်လောက်ရှိတယ်။စစ်တပ်ကဘယ်သူမှမပါဘူး အပြစ်မဲ့တဲ့ခရီးသွားပြည်သူလူထုကို တိုက်ခိုက်တာ ခင်ဗျားတို့ သတင်းဌာနတွေသိရဲ့လား ။ မယုံဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ သတင်းဌာနက သတင်းထောက်တွေကို လွယ်ဂျယ်-ဗန်းမော်လမ်းက ကားသမားတွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေကို ကေအိုင်အေကဘယ်လိုမိုင်းခွဲတယ်ဆိုတာ လာမေးကြည့်ပါ။ကေအိုင်အေက ဒါမျိုးတွေလုပ်နေရင် အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ အတူတူပဲလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုတွေက ထင်မြင်ယူဆတယ်။ အစိုးရမကောင်းတဲ့ သတင်းလည်းတင်ပေါ့။ဒီလို ကေအိုင်အေရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုလည်း သတင်းအဖြစ်တင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
Reply မျိုးချစ် January 20, 2013 - 10:54 pm တရုတ်ကဗမာလေယဉ်ရောင်းကချင်ကိုတော့လေယဉ်ပြစ်သေန နုနုင်ငံင်တ်တွင်ရောင်းကြားကမြတ်တာကတရုတ်ပါ။နိုထပါတောမြန်မာပြည်နိုိုင်ငံနာလှပါပြီ။
Reply Ngwe Soe January 21, 2013 - 12:02 pm Absolutely. The Chinese are laughing and laughing. Their balls are almost pumping out of the skins now and they will fall everywhere in Burma.
Reply J Z Zaw January 21, 2013 - 4:26 pm They didn’t use any chinese jet fighters.Also,chinese not supplied any arms to kia.Just supply to WA.You know why?Wa=Chinese.Aung Nat = Gote kyar.
Reply ကချင်လေး January 21, 2013 - 8:26 pm မောင်လဆိုင်း ပြောတာအမှန်ပါ။မျှမျှတတ မြင်ပါ။ရေးပါ။ခံစားနေရတာက ကျွန်တော်တို့ ကချင်ပြည်နယ်သားတွေပါ။